by ET - Comments:0- Views: 359
မိမိရေးသားလိုကျသော စာတဈပုဒျအား စနဈတကနြှငျ့ မိမိ၏ စာဖတျသူမှ မဖတျခငျတှငျ ဖတျခငျြလာအောငျ၊ ဖတျနဆေဲတှငျ ဆကျပွီးဖတျခငျြအောငျ၊ ဖတျပွီးလြှငျလညျး စှဲနအေောငျ လုပျဆောငျနိုငျရနျတို့မှာ စာရေးသူတို့၏ တာဝနျဖွဈပါသညျ။...
by sHa92 - Comments: 1 - Views: 528
by ET - Comments:0- Views: 258
Crazy Talk သက်မဲ့ရုပ်ပုံကို အသက်သွင်းစကားပြောခိုင်းရအောင်
Crazy Talk ကတော့ ရိုးရိုး ဓါတ်ပုံလေးကို လူစကား ပြောသလို လုပ်လို့ရပါတယ် . ကားတွန်းကား တွေမှာ တွေ့ဖူးပါလိမ့်မယ် . တိရိစ္ဆာန်က စကားပြောနေတာ . အဲ့ဒါ crazy Talk ကို အခြေခံပြီး လုပ်ထားတဲ့ သဘောပါ .. သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ အစက်ကလေးကို သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ မျက်နှာနေရာမှာ ထားလိုက် ပြီးတာနဲ့ ကိုပြောစေချင်တဲ့ စကားလုံးကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ . အဲ့ဒီ့မယ် စကားစပြီး ပြောပါလိမ့်မယ်ဗျာ . သက်မဲ့ရုပ်ပုံကို...
by ET - Comments:0- Views: 341
Download Youtube Video + 3.3.51
Mozilla Firefox မှာ Addon အဖြစ်သုံးတာပါ။
ဘယ် Downlaod manager မှ မလိုပါဘူး ဒီ Add on လေးကိုရှာပြီး install လုပ်ရုံပါပဲ. အလုပ်လည်းမရှုပ်ဘူးပေါ့။.
Firefox ရဲ့ ------------
(1) Tools menu မှ Add-ons (Ctrl+Shift+A) ကိုနှိပ်ပါ။
(2) Get Add-on ကိုနှိပ်ပါ။
(3) Search Box ထဲမှာ Download Youtube Video + 3.3.51 ဆိုပြီး ရိုက်ရှာလိုက်ပါ။
(4) အောက်ပုံပါအတိုင်းကျလာရင် Install ကိုနှိပ်ပေးပါ။
by ET - Comments:0- Views: 255
Word ကိုအသုံးပြု၍ page ထဲမှာ Portrait နဲ့ Landscape နှစ်ခုတွဲသုံးခြင်း
ကျနော်ပေါ့ဗျာ စာတမ်းလေးရေးနေရင်း ပုံလေး ပါတဲ့ page ကို ကြီးနေလို့ သူ့တခုထဲကို landscape လေးနဲ့လုပ်ပေးရမယ် ဒီတိုင်းလုပ်တာ ဘယ်လိုမှ မရဘူးလေ (မသိတော့လဲ လည်နေတာ) သူပေးထားတဲ့ နေရာကနေ portrait နဲ့ နောက်တခု landscape ဆိုပြီး ပေးထားတယ်၊ အဲ့ကောင်လေးကို ပြောင်းလိုက်ရင် တခြား pageေ တွပါ landscape အကုန်ပြောင်းကုန်တယ်လေ၊၊အဲ့ဒါနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ရိုက်ပြီးတော့ ရှာလိုက်တော့ ဆိုဒ်တခုမှာရှင်းပြထားပါတယ်.page...
by ET - Comments:0- Views: 265
Kaspersky KryptoStorage [Software Review]
သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖိုင်တွေနဲ့ အချက်အလက်တွေကို မဆိုင်သူတွေ အသုံးမပြုနိုင်အောင် cutting-edge transparent encryption technology ကိုသုံးပြီး ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သင့်ကွန်ပျူတာမှ ဖိုင်များကို delete လုပ်ရာမှာလည်း Data Recovery Software တွေနဲ့ပြန်မရှာနိုင်အောင် permanently delete လုပ်ပေးလို့ ဖျက်လိုက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ အတွက်လည်း ပူစရာမလိုပါဘူး။
by Htet Naing - Comments:0- Views: 207
Google Talk Shell V1.2.1 [Article]
Google Talk Shell V1.2.1
ဒီအကြောင်းအရာလေးကလည်းကြာပါပြီ ။ လူသိနည်းသေးတယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်လေ။
ဒါကြောင့် ကျနော်က မသိသေးတဲ့သူတွေ သိအောင်နဲ့သုံးလို့အဆင်ပြေအောင် ပြောပြလိုက်ပါတယ်။
တစ်ချို့၊ ဂျီတော့(ကိုယ်နဲ့Chatting )ပြောနေတဲ့သူတွေရဲ့ပုံလေးတွေ တစ်ပုံပြီးတစ်ပုံပြောင်းသွားတာတို့
သီချင်းနာမည်တွေ တစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ်ပြောင်းသွားတာတွေကို သတိများထားမိမလားမသိဘူး။
အဲ့ဒါက Auto လုပ်ပေးထားတာပါ ။
ကဲ..အောက်မှာရေးထားတဲ့ Features တွေကို ဖတ်ကြည့်ရင်း ဘာတွေအသုံးတည့်လဲဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
by ET - Comments:0- Views: 246
G-mail အသုံးပြုနည်းနှင့် G-talk အသုံးပြုခြင်းလမ်းညွှန် [Article]
အင်တာနက်စသုံးတော့မယ်ဆိုရင် လူတော်တော်များများက ဂျီတော့နဲ့စကားပြောမယ်
ဆိုပြီးအကောင့်တွေလုပ် ခိုင်းပြီး G-talk အကောင့်နဲ့ အင်တာနက်စသုံးတော့တာပဲ ….အဲ့ဒီအတွက်
G-talk မပြောခင် အကောင့် လုပ်နည်းလေးကို အရင်ဖော်ပြချင်ပါတယ်
(၁) G mail အကောင့်လုပ်နည်း
Step(1)	Mozilla ရဲ့ URL (address) Bar မှာ [You must be registered and logged in to see this link.]
by ET - Comments:0- Views: 1260
About of Dropbox
by ET - Comments:0- Views: 185
Microsoft Power Point ဖြင့် Presentation တစ်ခုဖန်တီးခြင်း
ဒီရည်ရွယ်ချက်က Flash Song မှ Flash song ဖြစ်နေသူများအတွက်ပါ။
အဲ့ဒိတော့ ကိုယ်ဆီမှာရှိတဲ့ Power Point ကိုကော သေချာကျွမ်းကျင်ပြီလား......
Power Point နဲ့ပဲ Flash song လို ပုံနဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်မြောက်အောင် ဖန်တိးယူလို့ရပါတယ်
အဲံဒီတော့ အခြေခံသင်ခန်းစာလည်းဖြစ်အောင် Presentation တစ်ခုလုပ်ကြည့်ကြရအောင်.
ဒီသင်ခန်းစာက လေ့လာနေသူ အခြေခံအဆင့်များအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အကူညီရနိုင်ပါစေလို့........
MITR ဖိုရမ်ကနေ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ
by ET - Comments:2- Views: 221
၄င်း၏ အဆိုအရ browser များတွင် ပါဝင်သည့် နာမည်၊...
by water - Comments:0- Views: 227
New Technologies for Electricity [Article]
နည်းပညာဆိုင်ရာ Idea အချို့
ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သိပ္ပံပညာသည် စက္ကန့်နဲ့အမျှ တိုးတက်လျှက်ရှိရာ တိုးတက်လာသည်နှင့် အမျှ အသုံးအဆာင် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ ယာဉ်အမျိုးမျိုးတို့အတွက်...
by Slip - Comments:0- Views: 240
Proxy Server ဆိုတာ သင့်ကွန်ပျူတာနဲ့
အင်တာနက်ကြားမှာ တည်ရှိပြီး အင်တာနက်က သတင်းအချက်အလက် တော်တော်များများကို
ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က Website တစ်ခုကို ကြည့်တဲ့အခါ
အရင်ဆုံး Proxy Server ဆီကို request ရောက်သွားပါတယ်။ Proxy Server က
သူ့ဆီမှာ ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့ Website ရှိရင်
ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်တာနက်သုံးစွဲရတဲ့သူအဖို့
ပိုပြီးမြန်တဲ့ကောင်းကျိုးကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်က
Proxy Server တွေဟာ အဲဒီလို Cache လုပ်တာထက် Website Filtering အတွက်ပဲ
လုပ်ထားသလားလို့တောင် ထင်ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာပြည်မှာ
by ET - Comments:0- Views: 946
Gmail Back Up (or) Gmail Hacking(Gmail သုံးသူများအထူးသတိရှိရန်)[Article]
G mail သုံးသူတိုင်းသတိပြုနိုင်အောင်လို
by ET - Comments:5- Views: 402
IT လောကမှ သင်းကွဲခြင်္သေ့များ [Article]
Myanmar Tutorials မှ “Why we can’t skip the basic step” Post လေးဖတ်ရင်း အတွေးဝင်လာလို့ ရေးဖြစ်သွားပါတယ်။ အစကတော့ စီကာပတ်ကုံး ရေးနေတာ ၊ ရေးချင်တာတွေများပြီး ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ စာဖတ်သူကို ပေးချင်တဲ့ message မရောက်ဘဲ ပိုစ့်က ထိရောက်မှုမရှိမှာစိုးလို့ ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက် ရေးတတ်သလို အဆင်ပြေမယ့်ပုံစံ ချုံ့ရေးထားပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ စိတ်ကူးပေါက်ရာပေးလိုက်မိတယ်။
မြန်မာတွေ ဘာလို့ Team Work နှင့် မရင်းနှီးတာလဲ
-ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကစားနည်းတွေတိုင်းမှာ...
by sHa92 - Comments: 12 - Views: 457
ဘာကြောင့် Hard Disk Space မမှန်ရတာလဲ [Article]
ကျွန်တော်တို့ Computer Hard Disk ဖြစ်စေ
Portable Device တစ်ခု ဖြစ်စေ2GB အရွယ်ရှိတဲ့ Pendrive တစ်ခုက 1000 GB
ခန့် နဲ့ 1TB ရှိတဲ့ Hard Disk Space က 931 GB လောက်ပဲ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ
ဘာကြောင့်လဲလို့ လူတော်တော်များများ စပ်စပ်စုစု
2GB အရွယ် Drive တစ်ခုကို
ဥပမာကြည့်ရအောင်။ ၄င်းမှာ Total ကိုကြည့်လိုက်တော့...
by solakoko - Comments: 1 - Views: 323
Top 10 IT HEROES[Article]
သူရဲကောင်း (heroes) တွေဆိုတာ လုပ်ငန်းတိုင်း၊
နယ်ပယ်တိုင်းမှာ ရှိတတ်ကြပါ တယ်။ အဲ့သလိုပါပဲ၊ လူကြမ်း (Villain) ဆိုတာတွေက
လည်း ရှိတတ်ကြစမြဲပါ။ ဒါပေမယ့် လူကြမ်း (Villain) တွေရှိမှ သူရဲကောင်း
(heroes) ဆိုတာ ပေါ်လာကြရ တာမို့လား။ စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အိုင်တီ လောကရဲ့ သူရဲကောင်း (IT heroes)
တွေကို ရွေးထုတ် ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ ကြီးကျယ်ထင်ရှားတဲ့...
by mars - Comments:0- Views: 258
ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကြားမှာ ကွန်ပျူတာ၊ အိုင်တီ၊ အင်တာနက်
ဆိုတဲ့ဝေါဟာရတွေက ပလူပျံအောင်ကြား နေရပါတယ်။ များပြားလှတဲ့ ကွန်ပျူ
တာသင်တန်း ပေါင်းစုံ လက်မှတ်ပေါင်းစုံ နောက်မှလူငယ် တွေခမျာ
ငွေထုပ်ပိုက်ပြီး တကောက်ကောက်လိုက်တက် နေကြရပေမယ့် တကယ်တမ်း သင်တန်းတွေပြီး
လက် မှတ်တွေရကြတဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ယောင်ချာချာ ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။
တစ်ချို့ကတော့ နိုင်ငံခြား ထွက် အလုပ်လုပ်ဖြစ်ကြပေမယ့် ICT
ဆိုတာပြည်တွင်းမှာ အသုံး ချလို့မရတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။...
by mars - Comments:0- Views: 290
ပရိုဂရမ်မာဖြစ်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်လိုပါသလဲ[Article]
စာအုပ်ဆိုင်တွေရှိတဲ့ ဘက်ကို သင်လမ်းလျှောက် ကြည့်ဖူးမှာပါ။ ဂျာဗားကို ၇ ရက်အပြတ်သင်၊ Visual Basic၊ ၀င်းဒိုး၊ အင်တာနက် စတာတွေ ကို နာရီအနည်းငယ် သို့မဟုတ် ရက် အနည်းငယ်နဲ့ အပြတ်သင် ဆိုတာမျိုး တွေပေါ့။
တစ်ခါက Amazon ဆိုတဲ့ ၀ဘ် ဆိုဒ်မှာ ဒီလို ရှာကြည့်ဖူးတယ်။
ထုတ်တဲ့ရက် ၁၉၉၂ နောက် ပိုင်း၊ ခေါင်းစဉ်မှာ days ဆိုတာပါ ပြီး Learn သို့မဟုတ် Teach yourself ဆိုတာလည်းပါတဲ့ စာအုပ်များဆိုပြီး တော့ ရှာကြည့်တာ ၂၄၈ ခု ထွက်လာ ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ၇၈ အုပ်ဟာ ကွန်ပျူတာ စာအုပ်တွေ ဖြစ်ပြီး ၇၉ ခု မြောက်ဟာ ဘင်ဂါလီဘာသာကို ၃၀ရက်နဲ့ အပြတ်သင်ဆိုတဲ့ စာအုပ် ဖြစ်တယ်။
ဒါနဲ့ days ဆိုတဲ့ စာလုံးကို...
by mars - Comments:5- Views: 344
IT နဲ့ပတ်သက်လို့ လိုင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲ မှာ (၃) ခုကို...
by mars - Comments:0- Views: 270
ပထမဦးဆုံးသော ကွန်ပျူတာများ (computers) သည် လူသားများပင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၂၀ ခုနှစ်မတိုင်မီ က တွက်ချက်မှု (computation) များကို လုပ်ကိုင်ကြသော စာရေးစာချီများကို တွက်ချက်သူများ (computer) များဟု ခေါ်ဆိုကြပေသည်။ မူလအစအားဖြင့် ကွန်ပျူတာ ဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် အလုပ်၏ခေါင်းစဉ်အမည် ပင်ဖြစ်ပြီး၊ ရေကြောင်းသွားလာမှုစာရင်းဇယားများ၊ ဒီရေ အတက်အကျနှင့်နက္ခတ်တာရာပြက္ခဒိန်များအတွက် နက္ခတ်တာရာ အနေအထားများ စသည်တို့အတွက် အဖြေရလာဒ်များ ရရှိရန်လိုအပ်သော တွက်ချက်မှုများ အား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရသောသူများကို ဖော်ပြညွှန်းဆို ရန် အသုံးပြုခဲ့ကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထိုကွန်ပျူတာ အများစုသည် အတွက်အချက်ကျွမ်းကျင်သော...
by mars - Comments: 1 - Views: 327
အခုအချိန်မှာ laptop တွေကလည်း ဒုနဲ့ဒေး ထွက်ပေါ်နဲ့ပြီး laptop, netbook စသဖြင့် အမျိုးအစားတွေကလည်း အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒီ လို ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ ရွေးခြယ်မှုတွေကြားမှာ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ laptop တစ်လုံး ကိုအကောင်း ဆုံး ရွေးခြယ်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် အခြေခံ အချက်လေးတွေကို စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Laptop တစ်လုံးဆိုရင် ပထမဦးဆုံး စဉ်းစားမိတဲ့အချက်ကတော့ အရွယ်အစားနဲ့ပုံစံပါ။ အရွယ်အစား သိပ်သေးလွန်းရင် စာရိုက်ရတာ နှေးကွေးမယ်။ အလုပ် တွင်မှာ မဟုတ်သလို၊ မလိုအပ်ပဲ ကြီးလွန်းနေပြန်တော့လည်း laptop ရဲ့ ရည် ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ အလွယ်တကူ သယ်သွား နိုင်မှုကို ထိခိုက်လာပြန်ပါတယ်။ laptop ကို သာမန် အားဖြစ် screen size နဲ့ ခွဲခြားလိုက်မယ်ဆိုရင်...
by mars - Comments:3- Views: 233
တကယ်လို့ ခင်ဗျားဟာအရေးတကြီး စာပို့စရာရှိနေပြီဆိုရင်
ပို့ရမဲ့လူတွေက အရေအတွက်များနေရင် လိပ်စာနောက်က
@gmail.com မထည့်ပဲ username တွေကိုပဲ comma
( , ) တွေခံပြီး ပို့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ username တွေဟာ
အရင်က စာအဆက်အသွယ်လုပ်ဖူးတယ်ဆိုရင် gmail ရဲ့
adress book ကနေ အလိုအလျောက် အလုပ်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ် ။
by ET - Comments: 23 - Views: 495
ယနေ့ခေတ်ကာလ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ Computer နဲ့ အမြဲ အလုပ်လုပ်နေကြရပါပြီ။ Computer ရဲ့ Monitor ကိုပဲ တစ်ချိန်လုံး
ကြည့်နေရတော့ Monitor က ထုတ်လွှတ်တဲ့ ရောင်ခြည်ကြောင့် မျက်စိတွေ အနည်းနဲ့အများ ဆိုသလို ဘေးဥပါဒ် ဖြစ်လာကြပါပြီ။
ခေါင်းကိုက်၊ ဇက်ကြောတက် ဝေဒနာလည်း အားလုံးလိုလို ခံစားနေကြရပါပြီ။ Computer ကို အလုပ်ထဲမှာ သုံးတာဖြစ်ဖြစ်၊
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်စိတွေကို အားစိုက်ထုတ် ရ တာပါပဲ။ ကြာလာရင် မျက်စိတွေ နာကျင်လာမယ်။ ယားယံလာမယ်။
ခြောက်သွေ့လာမယ်။ အမြင်တွေဝါးပြီး မြင်ကွင်းနှစ်ထပ်ဖြစ်လာမယ်။ Monitor ကနေ မျက်စိကိုခွာပြီး...
by ET - Comments:0- Views: 251
ကမ္ဘာ့ရာဇ၀င်ကို လေ့လာမည်ဆိုလျင် နိုင်ငံအသီးသီး၌ လူစွမ်းကောင်းတွေ ရှိခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရလိမ့်မည်၊ မြန်မာ့ရာဇ၀င်၌လည်း ပုဂံခေတ်က ကျန်စစ်သား၊ ငထွေရူး၊ ငလုံးလက်ဖယ်၊ ညောင်ဦးဖီးဟူ၍ လူစွမ်းကောင်းတွေရှိခဲ့ကြသည်၊ သူတို့လေးဦးလောက် မကျော်ကြားသော်လည်း အခြားလူစွမ်းကောင်းတွေ မြန်မာ ရာဇ၀င်၌ ရှိခဲ့ကြသည်၊ လူတွေက လူစွမ်းကောင်းတွေကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြသည်၊ လူစွမ်းကောင်းကို သူရဲကောင်းအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ကြသည်။
ကမ္ဘာ့ရာဇ၀င်ကို လေ့လာမည်ဆိုလျင် နိုင်ငံအသီးသီး၌ လူစွမ်းကောင်းတွေ ရှိခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရလိမ့်မည်၊ မြန်မာ့ရာဇ၀င်၌လည်း ပုဂံခေတ်က ကျန်စစ်သား၊ ငထွေရူး၊ ငလုံးလက်ဖယ်၊ ညောင်ဦးဖီးဟူ၍ လူစွမ်းကောင်းတွေရှိခဲ့ကြသည်၊...
by mars - Comments:0- Views: 232
Copy & Paste ရဲ့နောက်ကွယ်[Article]
Copy & Paste ရဲ့နောက်ကွယ်
လူငယ်အများစုလုပ်တတ်တာလေးတစ်ခုပေါ့..ကိုယ်သဘောကျတဲ့ပုံတွေစာတွေတွေ့ရင် Copy ကူးလာတယ်ပြီးတော့ကိုယ်သုံးနေကဆိုက်
မှုာပြန် Paste လုပ်တယ်.. Ning Creator တွေကတော့အဆိုးဆုံးပေါ့...ပုိ့စ်တွေဖောချင်းသောချင်းရေးနိုင်သူတွေမှမဟုတ်တာ နော်
by firef0xxx - Comments:5- Views: 336
Linux ဟာ Unix-Like ဖြစ်တဲ့အတွက် Unix Opertion Systems အကြောင်းအရင်ပြောပါမယ်။ UNIX ကို AT&T က 1969 မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ Computer လောကမှာ Unix က နမည်ကြီးပြီး နေရာယူထားတဲ့အချိန်မှာ Microsoft ဟာ Unix ကို စီးပွားရေးလက်ဝါးကြီးအုပ်မှုနဲ့1970 မှာတရားစွဲခဲ့တယ်။ အဲဒီပွဲမှာ Unix ကရှုံးသွားတော့ Unix Source တွေကို အလကား ယူသုံးကြတယ်။ နောက်(၁၀)နှစ်လောက်ကြာတော့ 1980 မှာ Unix ကအမှုကိုပြန်ပြီး အယူခံဝင်တယ်။ Unix ကခိုးသုံးသူတွေကို လျော်ကြေးတောင်းတယ်။ မပေးနိုင်တဲ့သူတွေကို Kernel သာသာလေး Computer ခေါ်ရတယ်ဆိုရုံလေး ပေးထားလိုက်တယ်။
အဲဒါကိုမကျေနပ်တော့ Andrew S. Tanenbaum...
by Htet Naing - Comments:0- Views: 321
ကျနေ်ာထင်တယ် စာစီစာရွက်အတွက်ဆို MS Excel နဲ့ Adobe Pagemaker လောက်ဆို တေ်ာတော်အသုံးဝင်ပါပြီ
MS Word နဲ့  Powerpoint ကိုတော့ နည်းန်ညးလောက်သိထားရင်တော်လောက်ပါပြီ
ကျနေ်ာကိုယ်တိုင်လည်း Word နဲ့ Powerpoint သုံးတတ်ရုံလောက်ပဲ လေ့လာထားပါတယ်
အခု ဒီမှာ အမြန်ဆုံးစာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းနားလည်းအသုံချနိုင်ဖို့ ကျနေ်ာသိသလောက် နေ့စဉ် ရေးသားပါမယ်
ကျနေ်ာအခုရေးတာက တတ်ကျွမ်းသူများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး စတင်လေ့လာသူများအတွက် အကျိုးရှိစေဖို့ပါ
ကျနေ်ာလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတာပါ
by ET - Comments:9- Views: 284
အွန်လိုင်းမှာ တစ်ချို့သော Website တွေက လာရောက်လည်ပတ်သူကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ malicious code တွေ / virus တွေကို မြှပ်နှံ့ထားတတ်ပါတယ်.. ဒါကလည်း search engine နဲ့ အချို့သော Social Site တွေကနေ ၀င်လာတဲ့ Link တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိအသုံးပြုတဲ့ website က Official Site ဖြစ်မှသာ ပိုပြီးစိတ်ချရပါတယ်။ Official Site မှာကော malicious code တွေထည့်လို့မရဘူးလားဆိုတော့...
by mars - Comments:0- Views: 230
ရန်ကုန် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်က ဝိုင်မက် သင်တန်းတစ်ခု တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်မည်[Article]
ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်း၍ နည်းပညာသစ်တစ်ခုအနေဖြင့်
သင်ကြားပေးမည့် Wireless and Mobile Computing ( WiMac) သင်တန်းသစ် တစ်ခုကို
မကြာမီတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ WiMac သင်တန်းတွင် ကွန်
ပျူတာပရိုဂရမ်ဖြင့် ရေးသားထားသော Java Mobile Programming (J2ME), Win CE. Net
Programming ဘာသာရပ်များနှင့် မိုဘိုင်းလ်နည်းပညာဆိုင်ရာဘာသာရပ်များအား မိုဘိုင်းလ်
ဖုန်းများပေါ်တွင် သင်တန်းသားများကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ ရေးသားထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သော
Mobile Application Program များအား တည်ဆောက်နိုင်သည်အထိ စာတွေ့၊လက်တွေ့ပေါင်း
by mars - Comments:0- Views: 254
Windows administrator အသစ်တွေ မှားတတ်တဲ့အမှား[Article]
မိုက္ကရိုဆော့ဖ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဟာသုံးစွဲသူတွေအတွက်လွယ်ကူ အောင်လုပ်ထားပေးတာဖြစ်လို့သုံး စွဲသူတွေအတွက်အနည်းငယ်သိရုံ တင်အဆင်ပြေအောင်လုပ်သွားနိုင် တဲ့ထုတ်ကုန်တွေပါ။ OS တွေဟာ အမြဲတမ်း ပိုမိုကောင်းလာသလို application တွေကလည်းသုံးစွဲ သူတွေ အတွက်ကြီးမားတဲ့ အခက် အခဲတွေမဖြစ်စေပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စီ မံခန့်ခွဲရေးကို နောက်ကွယ်ကနေ လုပ်ကိုင်ပေးနေရတဲ့ administrator တွေအတွက်တော့
အခက်အခဲ လေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ virus တွေကစလို့ သုံးစွဲသူတွေကြောင့် ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဆုံးလိုက်ပြီး တော့ဖြေရှင်းပေးရတာမလွယ် ကူ ပါဘူး။ သုံးစွဲသူတွေကလည်းတစ် ခါတစ်ရံမှာသူတို့ဘာလုပ်လို့ဒီလိုဖြစ် သွားတယ်ဆိုတာကိုမသိလိုက်တဲ့အ ခါတွေမှာတော့ အတွေ့အကြုံသိပ်...
by mars - Comments:0- Views: 247
by sHa92 - Comments:7- Views: 272
by Htet Naing - Comments:0- Views: 295
မန္တလေးမြို့၌ သံဃာတော်များအတွက် အခမဲ့Computerသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆) အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့
မန္တလေးမြို့မှာဦးဇင်းအနေနဲ့ သံဃာတော်များ အတွက်အခမဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းများဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးခဲ့တာ အဓိက သင်တန်းချိန်များ စက်များကိုကူညီပေးသူ ဦးရဲဝင်းနောင်(Pro-Tech) ကွန်ပျူတာစင်တာမှဖြစ်ပါတယ်။ ဦးရဲဝင်းနောင် အခုလိုသင်တန်းချိန်များလှူဒါန်းခဲ့တာ
တစ်နှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းချိန် များနေ့လည် (၁)နာရီမှ(၃) နာရီအထိ သင်တန်းချိန်အဖြစ်သင်တန်းခန်းမဆောင်နှင့် စက်များကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။
by alt.332 - Comments:0- Views: 210
ဂျီတော့မှာ ဘာတွေလုပ် [Article]
ဂျီတော့အကြောင်းလေးတော့ ပါမှ ပြည့်စုံသွားမှာပါ။
ဂျီတော့ ကို လူကြီးတွေလည်းသုံးသလို လူငယ်တွေလည်း အသည်းစွဲပါ( ကျနေ်ာကိုယ်တိုင်လည်းပါမယ်ထင်တာပဲ...ဟီးဟီး)
နည်းပညာတိုးတက်လာတဲ့နောက်မှာ အန္တရာယ်ဆိုတာလည်း ကပ်ပါလာတတ်တာမို့ မ်ိဘတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်သားသမီးလမ်းမှားမရောက်အောင် သူတို့ အငိတာနက်မှာ ဘာတွေသုံးပြီး
ဒီတော့ မိဘတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်သားသမီးတွေ ဂျီတောခ့်ထဲမှာ ဘာတွေပြောနေတယ်ဆိုတာသိနိုင်မဲ့ ဆော့ဝဲလ် တစ်ခုကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်
ဆော့ဝဲလ် အမည်က IMBossw Gtalk Sniffer...
by ET - Comments:3- Views: 283
ကျွန်တော် အင်တာနက်ကို သုံးခဲ့တာ ဒီနှစ်မပါ အ၀င် ၈နှစ်ရှိပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈နှစ်တုန်းက ဆို...ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့...
by ET - Comments:3- Views: 347
တမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မျက်ခမ်းလှူပ်နေကြသော bot အန္တရာယ် [Article]
သင့်ကွန်ပျူတာဟာ bot အဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့သားကောင်လား လုံခြုံမှုမရှိတဲ့system တစ်ခုရဲ့ အစိတ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်နေပြီး spam တွေကိုဖြန့်ဝေနေပါသလား ???
botnet ဆိုတာဘာလဲ....bot netဆိုတာအင်တာနက်သုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာနက်ဝါ့ခ်တွေဖြစ်တယ်
သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ပဲ bot program တွေကိုစက်ထဲထည့်သွင်းခံလိုက်ရပြီး
အဲ့ဒီစက်တွေမှတဆင့်ပြီးတဆင့် bot တွေပွားသွားမယ့် zombie army ပဲဖြစ်ပါတယ်။
bot program ထည့်သွင်းခံရတဲ့စက်တွေကို zombie လို့ခေါ်ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ bot program ကို computer robot (or) bot လို့ခေါ်ပြီး သူတို့ရဲ့masters spam တွေ သို့ virus originator တွေရဲ့instructionတွေကိုလုပ်ဆောင်ရသလို...
by C0D3R - Comments: 1 - Views: 290
စီနီယာတွေကို မေးရင် သူတို့ကလည်း သူတို့ ကြိုက်တာ ပြောမှာပဲ။ ကိုယ်ကြိုက်တာနဲ့သူတို့ကြိုက်တာ တူမယ်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ပြောနိုင်မလဲ။ ခက်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသိကြတာ...
by Eracobengo - Comments:0- Views: 237
About MCSE certification [Article]
ကျွန်တော့် ငယ်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုနီလင်းရဲ့ MCSE နဲ့
ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းကို အောက်မှာ ပြန်လည် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ကိုနီလင်းဟာ
လက်ရှိ စင်္ကာပူမှာ လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်မှာလည်း British
Council မှာ Networking နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ
Information Beam ဆိုတဲ့ သင်တန်းကျောင်း တစ်ခုလည်း ဖွင့်ထားပြီး
အဲဒီမှာလည်း သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီဘလော့ကနေ တဆင့် ဒီလို ပြန်လည်
ကျွန်တော်က Microsoft System Engineer တစ်ယောက်ပါ။ MCSE အနေနဲ့ အလုပ်
လုပ်နေတာကလည်း ၅ နှစ်လောက် ရှိပါပြီ။ ဒါမတိုင်ခင်ကလည်း ICT...
by Guest - Comments:3- Views: 260
ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ ရှုံ့ချခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း [Article]
I want to shareapost from MMITP by Ko Myint Kyaw Thu.. I hope that our community can continue like this post.. then..
Original Post : [url=http://myanmaritpros.com/forum/topics/1445004:Topic:180224]
ကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတာ သူတပါးကို မကောင်းအမြင်နဲ့ ကြည့်ပြီး၊ တကယ်မဟုတ်တာကို
by mgpyone - Comments:0- Views: 283
ကျနော်တို့ ဒီမှာ TuT တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခု စမ်းကြည့်လို့ရသွားရင်...
by xtrm - Comments: 14 - Views: 468
Programming လေ့လာရာဝယ် [Article]
Every Newbie to programming world should read it first
I want to shareapost from MZ.. that's written by Ko Thar Thar
I hope that it may be very useful for all
Programming language ပေါင်းများစွာရှိလေသည်။ အဟောင်းဆုံးမှ
အသစ်ဆုံးထိရေတွက်သော် Assembly, Pascal, Prolog, Scheme, Ada, C, C++,
Java, Perl, Visual Basic, Java, C#,...
by mgpyone - Comments:3- Views: 586
အောင်မြင်သော အိုင်တီပရော်ဖက်ရှင်နယ် တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ နည်းလမ်းများ [Article]
ကျွမ်းကျင်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်ဝသော အိုင်တီပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် တက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ပထမဦးဆုံးမှန်ကန်တဲ့
အိုင်တီခေတ်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေအနေနဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ ရွေးချယ်ဖို့ လိုပါတယ်။
အိုင်တီအလုပ်အကိုင်တွေအနေနဲ့ Professional Level, Mangement Level နဲ့ Executive Level ဆိုပြီး အဆင့် ၃ ဆင့် ရှိပါတယ်။
အများစုကတော့ အခြေခံအဆင့်ဖြစ်တဲ့ Professional Level အဆင့် အလုပ်အတွေ့အကြုံ အရည်အချင်းနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်တွေ
အဆင့်ဆင့်ရရှိလာပြီဆိုမှ အထက်အဆင့်တွေကို တက်လှမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
by manawphyulay - Comments:5- Views: 330
Computer virus ဆိုတာ သူ့ကိုသူ attach လုပ်ထားတဲ့ program (သို့) file တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာတစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ပြန့်ှနှံ့ကူးစက်နိုင်ပါတယ်..လူတွေမှာ Virus ကူးသလိုပဲ ပြန့်နှံ့ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာရဲ့ System ကိုပုံမှန်အလုပ်မလုပ်အောင် နှောက်ယှက်မယ်၊ Windows ကို Error...
by K0ht3t - Comments:0- Views: 226
Nano နည်းပညာအကြောင်း တစေ့တစောင်း .. [Article]
nano နည်းပညာဟာလာမည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အရေးပါဆုံးနည်းပညာတစ်ရပ်ဖြစ်လာမှာ မလွဲပါဘူး။
nano နည်းပညာဆိုတာ အကြမ်းဖျင်းပြောရရင်အနုစကြ၀ဠာအတွင်းမှာရှိသောအရာတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးနဲ့ စပ်လျဉ်းနေတဲ့ နည်းပညာတစ်ရပ်ပါဘဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့် အလွန်အနုစိပ်လှတဲ့ atoms များ အတွင်းရှိ ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။
nano နည်းပညာဟာ စူးစမ်းလေ့လာနေတဲ့ အချိန်ရဲ့အတိုင်းအတာသဘောကို ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း onesecond ၏ အပုံတစ်သန်းပုံတစ်ပုံမျှသာရှိမည့် ကာလအတွင်းရှိ ဆက်ဆံ့ရေးတွေအကြောင်းပါဘဲ။
nano နည်းပညာဟာ အနုစကြ၀ဠာအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ရုပ်ကမ္ဘာလေးထဲမှာ ရှိတဲ့ နယ်နမိတ်တွေကိုတဖြေးဖြေး မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ်အောင် လုပ်နေပါပြီ။
by ET - Comments:0- Views: 426
graphic စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေဖို့ [Article]
Graphic နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေ ပါ .. ကောင်းပါတယ် .. ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး ..
Computer အသုံးပြုကြရာမှာ Monitor Screen ဟာလည်း အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Screen ပေါ်မှာ မြင်ရတဲ့ စာလုံးတွေ သေးငယ်နေမယ်၊ ပုံရိပ်တွေေ၀၀ါးနေမယ်၊ Screen တုန်ခါမှုတွေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် စိတ်ညစ်ဖို့ ကောင်းလှသလို မျက်စိကိုလည်း အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Computer Display ပေါ်မှာ ကြည့်လို့ ကောင်းလာအောင် ပြုလုပ်နိုင်တာလေးတွေကို...
by K0ht3t - Comments:2- Views: 302
အလွန်ကြီးမားသော (သို့မဟုတ်) ၁-အနောက်မှ သုည အလုံးတစ်ရာ (10100) လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့၊ မူရင်းစကားလုံး “googol” ရဲ့ အသံထွက် စာလုံး ပေါင်း (အမှား) နဲ့ “Google ”လို့ နာမည်တွင်တဲ့ အင်တာနက် ဘီလူးကြီးတစ်ကောင် ကို အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ California ပြည်နယ် ၊ Stanford University ရဲ့ Ph.D ကျောင်းသား နှစ်ဦးဖြစ်သူ Larry Page ( Michigan State University မှ ကွန်ပြူတာ သိပ္ပံနှင့် ဥာဏ်ရည်တု ဌာန ပါမောက္ခ Dr. Carl Victor Page ၏ သား) နှင့် Sergey Brin (ရုရှား ဘာသာ အားဖြင့် Сергей Михайлович Брин - ဆိုဗီယက်ရုရှား နိုင်ငံသား၊ ဂျူးလူမျိုး မိဘနှစ်ပါးမှ ပေါက်ဖွားပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့ အခြေချ နေထိုင်သူ) တို့မှ ၁၉၉၈...
by K0ht3t - Comments:0- Views: 278
လူ​တွေ ဘာလို့ ဒီ​လောက် ​လော​နေကြတာလဲ? [Article]
ဒီပိုစ့်ကို ကျနော်ကတော့ ၂ ဆင့် ခံ မျှဝေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိုစ့်က အသိပညာ အများကြီးပေးထားသလို ၊ ကျနော့်လို ယောင်ဝါးဝါး ဖြစ်ခါနီး Software Engineering Student တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှာပါ။
ကျနော်ကူးယူလာတဲ့နေရာကတော့ mmso.org မှ ဖြစ်ပြီး ပြန်လည် မျှဝေပေးထားတဲ့ သူကတော့ CyberHunter ဖြစ်ပါတယ်။
သူရေးထားတဲ့ အတိုင်း အစအဆုံးကူးပြီးဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးကို အောက်ပါ link မှ knowledge အတွက် ကူးယူဖော်ပြပါသည်
by sHa92 - Comments:3- Views: 528
Second hand Computer ကို ဘယ်လို ၀ယ်မလဲ .. [Article]
ဒါကတော့ ကိုယ့် အနေနဲ့ ကွန်ပျူ တာ အဟောင်း တစ်လုံးကို ၀ယ် ရင်အဲဒီ့ ကွန်ပျူတာကို လည်း ဖွင့် မကြည့်ချင်ဘူး .. ကြည့်ပြီး မှမ၀ယ်ဖြစ်တော့ဘူး ဆိုရင်လည်း မိတ်ပျက်မယ် ပေါ့ ဗျာ .. အဲဒီ့ အချိမှာ အဲဒီ့ ကွန်ပျူတာအထဲ မှာ ဘာတွေ ရှိတယ် ... ဘယ် လို ပစ္စည်းတွေ သုံးထားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ .. ကြည့်လို့ ရမယ့်နေရာကလေးတွေ ကို အားလုံး အနေနဲ့ ကိုယ့် အထင်ကလေးတွေ ကို ပြောပြစေချင်ပါတယ် ....ကွန်ပျူတာ အဟောင်းဝယ်မယ့် လူတွေ လည်း စဉ်းစားရမယ့် အခါ ကျရင် ဒီပိုစ့် ကလေး ကို မြင်ပြီးတော့ ဘယ် လို မျိုး ကို ရွေး ချယ် သင့်တယ် ဆိုတာကို စဉ်းစားနိုင်တာပေါ့ ... အားလုံးပဲ ၀ိုင်းပြီးတော့ ဆွေးနွေး ပေးကြပါဦးဗျာ ...
by K0ht3t - Comments:0- Views: 313
Myanmar IT Resource Forum » ARTICLES ZONE » » Article Page